प्रचण्ड-नेपाल समू’हले किन गर्यो संसद बैठक बहि’स्कार ? यस्तो छ कारण : – Sadhaiko Khabar
प्रचण्ड-नेपाल समू’हले किन गर्यो संसद बैठक बहि’स्कार ? यस्तो छ कारण :
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २४, २०७७ समय: ६:१९:२३
काठमाडौं/ नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कारसँगै संसद् बैठकबाट बाहिरिएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले संसद नभएका बेला ल्याएका अध्यादेशहरु पेश गर्ने कार्यसूची राखेको विरोधमा उनीहरुले संसद बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।
तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद बैठक सुरु भएकै दिन पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखिएको प्रष्टिकरण दिए । तर भीम रावलले आफूहरुको विरोध रहेको बताएका थिए । सभामुख सापकोटाले विरोध रहे पनि संसद बैठक अघि बढाउने बताएपछि प्रचण्ड माधव समूहले बैठक बहिस्कार गरेर हलबाट बाहिरिएका हुन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुन पार्टीको हो भनेर सभामुख अग्नि सापकोटालाई सांसद भीम रावलले प्रश्न गरेका छन् । ३ मिनेटको समय बोल्न दिइएको समयलाई पर सार्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । उनले भने, ‘यो कसको सरकार हो र वर्तमान प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो र यो सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने त्यसपछि कुरा गर्न सकिन्छ।’
उनले बोलिरहेका बेला नेकपा ओली पक्षका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति जनाएका छन्।